MACLUUMAADKA TARANKA CHI-CHI DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Chi-Chi Dog iyo Sawirro
Chihuahua / eeyo isku xidhan oo Shiinuhu qabqabtay
Flash Gordon iskudhafka Shiinaha ee Chihuahua oo u eg eey 3 bilood jir ah— 'Flash waa wax soo saar ka sameysan boodhadh Shiine Crested ah iyo Chihuahua. Isagu waa eeygii ugu jeclaa ee abid. Sidoo kale, isku dhafka noocyadu waxay soo saareen dabeecad run ahaantii la yaab leh. Wuu u dulqaataa aniga dabeecadda deggan iyo inanteyda 10-jirka ah xamaasad waalli ah, iyadoo weli sii heysa jawi kalgacal leh, ciyaar leh. Wuxuu jecel yahay dareenka dadka iyo eeyo kale . Isaga dheriga loo tababaray si fudud oo uu haddaba wax u baranayo amarrada aasaasiga ah tababar la'aan. Ka buuxa tamar, isagu had iyo jeer diyaar ayuu u yahay inuu baxo, laakiin wuu xasilloonaa habeenkii. Isagu wuxuu ku seexan doonaa cagahayga sariirta habeenkii. Runtii runtii waa farxad illaa iyo hadda waxaan rajeyneynaa sanado badan oo wehel kalgacal leh. '
Mexico waa laxiray
Chi-Chi maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Shiine Crest . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
DBR = Diiwaangalinta Taranka Noolaha
IDCR = Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee Naqshadeeye®
Flash Gordon iskudhafka Shiinaha ee Chihuahua oo u eg eey 3 bilood jir ah
'Kani waa Quinn, Shiineeskeena Crested x Chihuahua eey isku dhafan. Hooyadiis waxay ahayd Shiine Crested aabihiisna wuxuu ahaa Chihuahua. Labada waalidba waxay miisaameen 8 rodol. oo wuxuu fadhiyaa oo kaliya 1.6 rodol. sawirkaan. Wuxuu ku dhashay a qashin ah 7 , qaar waxay umuuqdaan Chihuahuas buuxa, qaar waxay u egyihiin Quinn oo labadoodaba gabi ahaanba wey bidaarteen! Waxay u ekaadeen sidii Mexico Timo la'aan , mooyee casaan bay ahaayeen! Quinn waa 7 todobaad jir sawirkan waana horeyba Aad u feisty ! Wuxuu sifiican ula ciyaaraa eeykeyga kale ee yar laakiin wuxuu ka baqayaa baaxada eyga weyn, laakiin wuu la qabsaday. Wuxuu inta badan ku ciyaaraa alaabada yar yar ee mukulaasha sida jiir cufan iyo kubadaha dawanka ka buuxsamay maxaa yeelay iyagu waa cabirkiisa. Weli wuu seexdaa wax badan, dabcan, laakiin maalinba maalinta ka dambaysa wuu sii kordhayaa. Maqaarkiisu waa mid aad u jilicsan dhogortiisuna waa mid aad u jilicsan. Wuxuu jecel yahay carruurta oo kaliya wuxuu jecel yahay gabadhayda 2-sano jirka ah. '
Quinn ee Chi-Chi eey yar oo 7 toddobaad jir ah
Spike the Chi-Chi (Shiine Crested / Chihuahua mix) oo jira 8 bilood, miisaankiisuna yahay 5.5 lbs - Waa inuusan helin wax badan, haddii ay jirto, wax ka weyn. Isagu waa eey weyn, aad u bulsheed oo firfircoon. '
'Kani waa sawirka walaalka iyo walaasha Chi-Chi (Chihuahua / Chinese Crested mix) eeyo yaryar oo jira 6 toddobaad. Halkaa aabe wuxuu kulahaa budo Shiine Crested ah halkaasna hooyadu waxay ahayd Chihuahua. Illaa iyo hadda, waxay jecel yihiin inay guriga oo dhan naga raacaan oo ay aad u ciyaaraan. Labadooduba waxay jecel yihiin in la qabto waxayna ku raaxaystaan ​​kulaylka diiran.
Walaalka iyo walaasha Chi-Chi (Chihuahua / Chinese Crested mix) eey yaryar oo jira 6 toddobaad
intee ayuu weyn yahay dibi mastiff ah
Liistada Ey-ga loo yaqaan 'Dog Mix Dog Mix' eeyaha
chow iyo dahabiga isku darsiga eeyaha
Ingiriisi iyo isku dhafka bulldog Maraykanka
madow iyo caddaan buluug ah buluug puppy puppy
chiwawa oo lagu qasay godka loo yaqaan 'pitbull'
uubato yar oo Jarmal isku darka adhijir